Sax Birta Solutions One-stop Soo-saareyaasha & Shirkado cusub-China Precision Metal One-stop Solutions Factory
Shaxda dahaaran ee Optic
Tijaabooyinka sayniska ee bulshada sayniska ee maanta waxay u baahan yihiin xisaab iyo cabbir aad u badan oo sax ah. Sidaa darteed, aalad si gaar ah looga sooci karo jawiga dibedda iyo faragelinta ayaa aad muhiim ugu ah cabbirka natiijooyinka tijaabada. Waxay hagaajin kartaa qaybaha kala duwan ee indhaha iyo qalabka sawir-qaadista mikroskoob, iwm. Goobta tijaabada indhaha ayaa sidoo kale noqotay badeecad ay tahay in laga helo tijaabooyinka cilmi-baarista sayniska.
Sax tuur biraha Plate Dhulka
Birta kabka ah ee saxan dusha sare leh ee T waa qalab wax lagu cabiro warshadaha oo inta badan loo isticmaalo in lagu sugo shaqada shaqada. Shaqaalaha kursiga fadhiga waxay u isticmaalaan dib -u -habeynta, rakibidda, iyo dayactirka qalabka.
Xaqiijinta saxda ah waxay ku habboon tahay soo saaridda shubka leh qaabab adag iyo saxnaanta cabbirka sare. Rinjiga saxda ah wuxuu leeyahay dhammaystirka dusha sare iyo saxnaanta cabbirka. Oo waxay ku habboonaan kartaa dalabka tirada yar. Intaa waxaa sii dheer, labadaba naqshadeynta iyo xulashada maaddada ee kabka, kabka qummanaanta waxay leedahay xorriyad aad u weyn. Waxay u oggolaaneysaa noocyo badan oo bir ah ama birta isku -darka ah ee maal -gashiga.Sidaasna suuqa shubka, shubka qummani waa kabka ugu tayada sarreeya.
Mashiinnada inta badan la adeegsado waxay u dhexeeyaan mishiinnada, laalaadka ilaa mashiinnada jarista ee kala duwan. Mid ka mid ah astaamaha mashiinnada kala duwan ee loo adeegsado farsamaynta birta casriga ah ayaa ah xaqiiqda ah in dhaqdhaqaaqooda iyo hawlgalkooda ay gacanta ku hayaan kombiyuutarro adeegsada CNC (kontaroolka lambarrada kombiyuutarka), oo ah hab muhiim u ah helitaanka natiijooyin sax ah.
Qalinka Granit Square Ruler, Isbarbar dhigyada Granite Precision, Sax Granite dusha sare, Sax Granite, La taaban karo Epoxy, Sax Granite Cube,